Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara biofuels | Netwọk Mgbasa Ozi
Uzo ohuru nke ume mmeghari ohuru ma obu ndi na adighi emetọ na-etolite karia. Anyi aghaghi iburu n’uche na igbanwe usoro ihe omuma nke oge a di mgbagwoju anya n’abali. Ya mere, anyi mikpuru n'ime ihe a maara dika mgbanwe mgbanwe ike. Otu n’ime ihe na-enye aka imetọ obere bụ biofuels. Ugbu a naanị site na aha, anyị nwere ike ịghọta ihe nke a gụnyere. Agbanyeghị, ọtụtụ mmadụ amaghị ihe eji me ha, ihe maka ha ma ọ bụ uru ha na-eweta karịa mmanụ ndị a na-aalụ.
Chọrọ ịmatakwu banyere biofuels? N’isiokwu a anyị kọwara ihe niile n’ụzọ zuru ezu.
1 Gịnị bụ biofuels
2 Gịnị ka e ji ha mee
3 Biodị biofuels
4 Uru na ọghọm ya
Gịnị bụ biofuels
A maara biofuels dị ka biofuels. Ọ bụ onyinye guzobere site mixtures nke bekee na organic mbido. A na-eji ihe ndị a enweta ume. A na-ahụta ka emeghari ma ọ bụ ike dị ọcha ebe ọ bụ na ihe ndị ahụ sitere na biomass. Ya mere, ihe omumu ihe a nke na - ebido ma na - achikota bu nke ohuru na oge.
Enwere esemokwu na nguzozi nke CO2 emit na CO2 nke biofuels ndị a na-etinye uche. Dị ka ihe ndị mejupụtara ogige a bụ ihe dị ndụ, n'oge ndụ ha, ha amụọla nke CO2 n'oge usoro photosynthesis. Ozugbo ha gwụchara ndụ ha, a na-eji ha eme mmanụ ndị a. N'adịghị ka isi iyi ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe dị ka anyanwụ, n'oge a na-eji biofuel a eme ihe, a na-ewepụkwa ikuku carbon dioxide. Ihe a gụrụ bụ nguzozi dị n'etiti CO2 nke emitụrụ n'oge ojiji ya megide CO2 nke etinyegoro na mmepụta nke ihe ndị sitere n'okike (ihe ọkụkụ).
Ruo taa, ekwuru na nguzozi ahụ dị mma, nke mere na ihe na-erughị CO2 ka a na-ebupụta n'oge ojiji ya karịa n'oge e guzobere ya.
Uru nke ihe ndị a bụ ha nwere ike dochie otutu ihe oriri mmanu mmanu. Site na nke a, a na-ebelata mmetụta nke ha na-ewepụta ma na-ewepụ ikuku gas gasị ụwa. Agbanyeghị na anwuru anwuru mgbe eji mmanụ ọkụ abụọ eme ihe bụ otu, n'oge usoro nhazi mmanụ CO2 anaghị etinye obi ya dị ka ọ na-eme na biofuels.
Gịnị ka e ji ha mee
Ugbu a, anyị ga-amata ụdị ahịhịa nke nwere ike iji mepụta biofuels. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ọ bụ ịtọgbọ ala, oke ịba ụba nke ala na ịkọ nri. Ihe ikwesiri iche bu na eji nri. Ihe ejiri mebe biofuel bu foduru nri.
N'ime ụdị osisi eji eme ihe anyị nwere:
Enwere ike ịkọwapụta biofuels ndị a ka ha bụrụ nnukwu ìgwè atọ, dabere na akụrụngwa ejirila rụọ ọrụ arụ ọrụ. Enwere biofuels mbụ, nke abụọ na nke atọ. Anyị ga-enyocha nke ọ bụla n'ime ha:
Ngwongwo nke mbu nke biofuels. Ndị a bụ ndị nwere mmalite na ihe ọkụkụ a na-eji enweta ngwaahịa maka nri mmadụ. Usoro mmepụta ihe ndị a kachasị mfe, ebe ọ bụ na a na-eji foduru nke mmepụta nri ndị a. Na mgbakwunye, ha dị ọnụ ala. Agbanyeghị, ọ nwere oke ụfọdụ nke nwere ike itinye ụjọ n'ihe oriri na ụdị ndụ dị iche iche site na mbenata ụdị osisi na mpaghara okike.
Nke abụọ biofuels. Typedị mmanụ a na-esite na nnukwu ọchịchọ maka biofuels dị na ya. A na - enweta ya site na biomass nke emepụtara na gburugburu ọhịa. Ihe ndi a bu lignocellulosic ma ihe okike ha bu osisi ma obu fibrous. Ha bụ biofuels nke na-echekwa ihe ọkụkọ CO2 na mbara igwe, mana ọ dị oke ọnụ ma sie ike ịmịpụta karịa ọgbọ mbụ. A na-emepụta ha site na ngwaahịa ndị na-abụghị maka nri ma ọ bụ nke bụ ihe mkpofu.
Ihe omuma nke ato nke ato. Ha sitere na biomass nke na-abụghị maka oriri ma ọ bụ ihe mkpofu mmadụ. N'ime ụdị a anyị gụnyere microalgae. A na-eji usoro ihe ọmụmụ mkpụrụ ndụ na-arụ ọrụ n'ime mmepụta ya na microalgae maka mmepụta nke biofuel na-esote.
Anyị ga-enyocha akwụkwọ mmanụ dị iche iche nke ọ bụla mara nke ọma ma jiri ya:
Bioethanol. Ọ bụ nke a na-enweta site na iko mmanya nke sugars dị n'ụfọdụ ụdị osisi. N'ime ụdị ndị a, anyị nwere ike ịchọta okpete, beets ma ọ bụ ụfọdụ ọka.
Ngwurugwu. Emeputa nke a site na mmanu akwukwo nri nke anyi nwere soybean, canola, rapeseed na jatropha oil. A na-eme ụdị ihe a ka e jiri ya mee ihe dị ka biodiesel.
Biopropanol ma ọ bụ biobutanol. Typesdị abụọ ndị a adịchaghị ewu ewu, mana a na-eme nyocha na ha ka ha nwekwara ike bụrụ ndị a na-ejikarị eme ihe dị ka abụọ ndị bu ụzọ.
N’agbanyeghị na ha nwere ike ịdị ka nzọpụta, ha nwere ọghọm na ọghọm. Anyị depụtara uru:
Costgwọ ọ ga-erughị nke mmanụ ụgbọala ma ọ bụ mmanụ dizel. Ihe eji eme ihe abughi ihe efu dika ha bu ihe efu.
Ọ na-ewepụta ọrụ na ọkwa mpaghara.
Ha na-ebelata anwuru.
Usoro mmepụta ihe na-arụ ọrụ nke ọma na obere mmetọ.
Ọ nwere ọkwa dị elu nke nchekwa na njikwa ya.
Mana ọ bụghị ihe niile nwere ike ịba uru. Anyị depụtara ọghọm:
Ojiji nke fatịlaịza nitrogen maka imepụta ihe ọkụkụ na-eme ka anwuru nitrogen oxide na-emetọ mmiri na ala.
Ha n’enye ike pere mpe karia ndi nke mbu.
Enwere oke ohia maka imepụta ihe ubi ma ụdị ndị a bụ ndị ahịa CO2.
Maka imepụta ụfọdụ mmanụ ala, a na-eji mmanụ ala eme ihe, nke na emewanye anwuru karia.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ike ndị a ndị ọzọ na-ese okwu banyere ma ha bụ ndị na-adịgide adịgide ma ọ bụ na ọ bụghị na ojiji ha kwesịrị ịbawanye na ọha mmadụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Biofuels
Stalactites na stalagmites